Gaardhka, Cayayaanka, Caarada iyo Xarkaha, Marrar Tray - Kingway
Flat Pan-ka ugu Fiican
Si Aad Saaxiibo U Noqoto
Cabitaan ama Casho
Shijiazhuang Kingway Imp. & Kordhinta Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay 2 0 0 8 waxayna ku taalaa magaalada shijiazhuang, gobolka hebei, Shiinaha, gaadiidku waa ku habboon yihiin deegaankuna waa qurux badan yahay. Warshadeenna iskaashiga ayaa daboolaysa 33,000 mitir murabac ah waxayna leedahay 82 shaqaale. Waxaa jira afar xarumood oo wax soo saar ah sida tuujinta DISA, hor-u-fiirin, is-habeyn.
ADEEGYADA KHUDBADKA & SARE
Madaarka iyo Cayayaanka
Kaamil ah burburin dhammaan dhir udgoon iyo samaynta waxyaabaha isku darka. Waxay ku habboon tahay isku-darka iyo u adeegidda guacamole — ama samaynta pesto iyo suugada kale ee rustic-ka ah.
Kabaha Quwada Iron Iron
Kaamil ah karinta iyo u adeegida qaybo gaar ah oo khudaar ah, dhinacyo, iyo macmacaan, Waxay bixisaa kuleyl aan la soo koobi karin iyo xitaa kuleyl; dabool kuxiro kudhaji dhadhan halka gacantu ay u oggolaaneyso gaadiid qaadid fudud
DADKA UGU HOREEYA EE UGU DAMBEEYA
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: • Qaabka iyo cabirka ayaa la hagaajiyay. • xiriir cunto oo badbaado leh waxaanna leenahay warbixinta LFGB iyo FDA.
Waxyaabaha: Marble dabiiciga ah Cabbirka: dia.13cm, dhererka 8cm xirid: sanduuq hadiyad ama sanduuq bunni ah Marble Mortar iyo Cayayaanka • Dhamaad ah oo burburin dhammaan dhir udgoon iyo sameynta waxyaabaha isku darka. • Waxay ku habboontahay iskudhafka iyo u adeegida guacamole — ama samaynta pesto iyo suugada kale ee rustic. • Saf la gali caleemo salaar si aad u isticmaasho baaquli ujeedo ujeedo leh. • Dhacdooyinka gudaha ee jilicsan ee hoobiye ayaa ka caawiya burburin iyo shiidi weelka. • Cayayaanka culus wuxuu kuu shaqeyaa adiga, oo hubinaya in si hufan leh u shiidid, qumbaha iyo qasitaanka.
Waxyaabaha: marble dabiici ah ama granimitir Cabbir: 43x30x1.5cm Xirmid: sanduuq hadiyad ama sanduuq bunni ah Saliil ama guduud goynta goynta • Dhamaad oo goynta ama u adeegida dhammaan noocyada cuntada. • fududahay in la nadiifiyo. • Qaabka iyo cabirka ayaa la hagaajiyay. • xiriir cunto oo badbaado leh waxaanna leenahay warbixinta LFGB iyo FDA.
sheyga magaca kabka birta dib loo rogi karo ee dhexroorkiisu yahay 43x23cm dherer 1.5cm daaha ka doorbidid xirmo bunni ama sanduuqa midabka astaanta astaanta gaarka loo leeyahay Astaamaha kuleylka habeynta ee ku habboon kuleylka ku habboon dhammaan karinta karinta iyo u adeegidda qeybaha khudaarta shaqsiyadeed, dhinacyada, iyo macmacaanka Waxay bixisaa haynta kuleylka aan habeysnayn iyo xitaa xitaa kululaynta; daboollada kuxiran dhadhanka halka gacanta ay u oggolaaneyso in si fudud lagu safro FDA la oggol yahay ee horay loo sifeeyay oo bir ah ayaa u oggolaaneysa in si dhakhso leh loo isticmaalo ...
badeecada magaca sheyga dhagaxa leh ee loo yaqaan 'mini minisese' oo leh dheeman dhexroor ah 10cm, 26cm dherer ah 5cm, 11.5cm xaraash ah preseasoned xirmo bunni ah ama sanduuqa midabka astaanta astaanta gaarka loo leeyahay Astaamaha kuleylka habeynta ee ku habboon kuleylka ku habboon dhammaan waxyaabaha wax lagu kariyo ee ku habboon karinta iyo u adeegsiga qeybaha shaqsiyadeed ee khudradda, dhinacyada, iyo macmacaanka Waxay bixisaa habeyn aan ku xirnayn iyo xitaa kuleyl; daboollada kuxiran dhadhanka halka gacantiisu ay saamaxeyso rarida fudud ee FDA ee la sii daayay ka hor xilli-xilli
Lambarka Shayga KAR26 Wareegga Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Balac Casriro 28x21cm 30x23cm Tilmaamo aan fiicnayn oo birqaloocyo iyo gacanta loop oo loogu talagalay xakameynta midabka casaanka midabka casaanka, jaalaha, buluugga, casaanka, madow, dahaarka dahabka leh ee loo yaqaan 'koollada koollada leh ee khafiifka leh 1. koobeynta waajibaadka-waajibaadka khafiifka ah ee loo yaqaan' Uthaning-Utility ' Qaybinta kuleylka sare iyo xajinta 3.Cast kuleylka bir si tartiib ah iyo si simanba 4.Perfect u ah cunto karinta tartiib tartiib Tilmaamaha: bir birqaadka iyo gacanta loop xakamaynta weyn ee dusha muraayadda jilicsan wax jawaab ah kama bixinayso waxyaabaha ay ka kooban tahay Prof ...